Date: 06 juillet 2017 - 11:14
Bonjour daholo. Mba saika hanontany ry zareo hoe aiza no misy mivarotra batterie-na ordi portable tsara sady atokisana. Ilay ana amin'izao efa tsy mety intsony fa dia tsy maintsy chargena rehefa mandefa azy. Vao miala ny chargeur dia maty avy hatrany koa ny ordi ka mba hividy vaovao. Misaotra mialoha ho an'izay mamaly.
Re: Batterie ordi portable
Date: 09 août 2017 - 19:58
Tsy hita izay azo antoka fa eny @ supreme mitady, asa hoe eny @ tena tompony ngah no mividy izany, ohatra samsung ny pc nao dia eny @ samsung zany manontany